တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: အမှန်တရားရဲ့ ကြေးမှုံပြင်
Be Sure you put your feet
inaright place, then stand firm.
သို့မဟုတ် ငါကို သတ်လိုက်ပါ။
reputation likeashadow is
what we think of it;
သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ အလားတူတာ စာရိတ္တဖြစ်၍
ငါတို့ ယူဆထားတဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားဆိုတာသည်
is that it comes one day atatime.
အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာမည့် အကောင်းဆုံး
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:26 PM
ကိုယ်ပိုင် ကြောက်စိတ်မှ အောင်မြင်ခြင်း
စံပြပုဂ္ဂိုလ် သူလို လူ